Established in October 1973, the University of Tsukuba is one of Japan’s leading comprehensive universities located in the city of Tsukuba, Ibaraki Prefecture in the Kantō region of Japan which also known as Tsukuba Science City. Ranked in the top 10 Japanese universities, Tsukuba has 28 college clusters and schools and is famous for research in physics, economics, physical education and social science. Both the campus and the city offer a pleasant, green environment for students to engage in cutting edge academic research and training.
According to BINUS UNIVERSITY and University of Tsukuba agreement, student majoring Japanese, International Business, International Business Management and Food Technology are allowed to apply for the student exchange to University of Tsukuba. Students from other majors are welcome to apply but need to consult BINUS International Office before choosing University of Tsukuba.
Application is open for every semester with 2 options available:
Scholarship (subject to availability): there is 1 slot scholarship for tuition, airfares and accommodation
Through regular exchange: tuition waived only at University of Tsukuba
About University of Tsukuba (Video)
Course List Info
Application Fall Semester 2018
Published at : 07 June 2017 Updated at : 17 September 2018